Xisbiga Mucaaradka ah ee Wadajir ayaa xaflad si weeyn agaasimay eeyna kasoo qeeyb galeen madax badan ku qabtay magaalada Muqsiho. Xafladdaan oo aheeyd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qeeyb galay Hoggaamiyaha Xisbiga Cabdiraxman Cabdishakuur Warsame, madaxda sare ee xisbiga,Masuuliyiin ka tirsan labada gole ee Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo weliba marti sharaf kale oo aad u badan.
Munaasabada oo aheeyd mid lagu weeyneeynayey maalinta xornimada iyo israaca ee labada gobol ee Waqooyi iyo Koofurta soomaaliya ayaa waxaa kasoo qeeyb galay boqolaal dadweeyne ah iyo indheer garad magaalada muqdisho aad looga yaqaano.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Mudane Cabdishakuur ayaa aad ugu dheeraaday sida loogu baahan yahay in wax la isaga weeydiiyo wixii dalka soomaaliya burburiyey, xoriyaddii lumiyey isla markaana halka maanta dalku joogo keenay. " Ma ahan inaan fasax ka qaadano waaqica aan ku noolnahay waa inaan runta wajahnaa , is weeydiinaa maxaa naga qaldamay" ayuu yiri Cabdishakuur.
Xafladaan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey garabka dhalinyarada ee Xisbiga wadajir.